Mayelana NATHI - Hebei Binshare New Material Co., Ltd
U-Hebei Binshare New Material Co., Ltd. uzibophezele ku-R & D nokukhiqizwa kwemikhiqizo yamakhemikhali. Silwela ukuhlinzeka ngemikhiqizo ehamba phambili kanye nensizakalo kumakhasimende emhlabeni wonke. Sinefektri yethu, ithimba lethu, kanye nohlelo oluphelele lwensizakalo Kithi, ukuqinisekiswa kwekhwalithi ukuzibophezela kwethu kumakhasimende ethu.Ukuphathwa kokuthembeka kuyisimiso sethu, ukwaneliseka kwamakhasimende njalo kuyinjongo yethu, siyethemba ngemizamo yethu, thola ukuqashelwa kwakho !
(1) Imikhiqizo esezingeni elifanele eyenziwe ngezinto ezibonakalayo.
(2) Ukupakisha okuhle futhi okuqinile njengokwezifiso
(3) Phendula imibuzo ngesikhathi
(4) Imibandela ehlukahlukene yokukhokha iyatholakala, faka i-T / T, L / C, D / P, West Union ...
Isikhathi sokulethwa sizoba phakathi kwamahora angu-12
Yonke imikhiqizo izobe ihlolwe ngokuqinile endlini ngaphambi kokupakwa
Iminyaka yesipiliyoni isisiza ukuthi sikunikeze ngesevisi ehamba phambili yokuhamba nangemva kokuthengisa
Ngama-oda amakhulu, Uma ngabe une-qty, sinentengo. Uyemukelwa uphenyo nemiyalo yakho
Ikhasimende liza kuqala, sinikeza inani elifanele, ikhwalithi ephezulu
mkhiqizo kanye mpahla ngokushesha
Impendulo esheshayo futhi ecacile emibuzweni yamakhasimende. Ukufudumala ngemuva kokuthengiswa
service, sizosiza ukuxazulula izinkinga ekusebenziseni kwakho.
Izidakamizwa ziyizimpahla ezikhethekile ezisetshenziselwa ukuvimbela nokwelapha izifo nokubuyisela nokulungisa ukusebenza komzimba. Ikhwalithi yayo ihlobene ngqo nempilo nokuphepha kwabantu.Uma eminye imithi ingcoliswe noma ingcoliswe yi-microorganisms, izinhlayiya zothuli, njll ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, izifo ezingalindelekile nezingozi kungenzeka.
Kwezokwelapha, igumbi elihlanzekile lezinto eziphilayo livame ukusetshenziselwa ukulawula ukungcoliswa kwamagciwane.Kugumbi elihlanzekile lezinto eziphilayo, lawa magciwane ikakhulukazi akhiwe ngamagciwane nesikhunta, ngosayizi wezinhlayiyana ka-0.Ngaphezulu kwe-2um, usayizi wezinhlayiyana ezivamile ongu-0.More than 5um , futhi ikakhulukazi enamathiselwe kwezinye izinhlayiya ezibonakalayo.Iziteshi zokungcola kwendalo hhayi kuphela emoyeni, kodwa futhi nangomzimba womuntu, nezingubo zomqhubi ezihlobene.
Inkampani yethu ikubheka kakhulu ukuphepha kwemikhiqizo. Umkhiqizo omuhle kakhulu awukwazi ukwehlukaniswa nendawo yokukhiqiza ehlanzekile kanye nenqubo yokukhiqiza esondele futhi ephelele. Sinemvelo yokukhiqiza ehlanzekile futhi evulekile, imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme kanye nochwepheshe abanamakhono.